ISISEKO I-JAKES GERWEL – ISiseko iJakes Gerwel
Home » ISISEKO I-JAKES GERWEL
Esi Siseko sisungule khona ukuze siqhubele phambili ilifa lika Gert Johannes Gerwel, umntu opheleleyo nowaziwa ngokuba ngumfundisi, umkhululi kwakunye nomphathi wezobugcisa, inkokheli yoshishino kunye nendoda yosapho. Izinto ubunokumphawula ngazo, yaye ebezinexabiso kulo nyana weKapa zizakubhengezwa ngemisebenzi yesiSiseko. Umntu apha ebekhangela kuluntu kwakunye nakuye ubuqu ukuzijula ijacu nokuthatha inxaxheba ngokunyanisekileyo futhi ngokuseqondweni eliphakame kakhulu.
Umnqweno woluntu oluthe ‘qwa’, olungenalubandlululo njengoko kumiselwe kumgangatho we Demokhrasi othe wavezwa kuMgaqo-siseko woMzantsi Afrika (RSA, 1996), wakha umbono walowo usungula esiSiseko, uNkosazana Phoebe Gerwel, ekuxhaseni iinkumbulo kunye neminqweno yomyeni wakhe ongasekhoyo. Kusisizathu soku ke le nto utshintsho kuluntu lwethu luyakuthi luncedwe kwimisebenzi yenzuzo yoluntu enjongo yayo ikukukhuthaza uphuhliso lwabantu, ingekuko oko kuphela kodwa, kumacandelo obugcisa kunye nenkcubeko, kwinstusela zemfundo kwakunye nezemidlalo ezimela eminye ibisakuya kuba yiminqweno yoko ebekuthanda ongongasekhoyo u Jakes Gerwel.
Enye yeenjongo esiSiseko esizimisele ukuba nogalelo kuyo, kukulwa indlala kwinkalo zonke, oku kuyakwenzeka nokuba kungoncedo lwezezimali okanye uququzelelo lwemicimbi ethile enokuthi inciphise iingxaki zabo bangathathi ntweni ekuhlaleni.
Oyena ndoqo, injongo yesisiSeko kukunika inxaso ekuyileni uluntu olukhululekileyo nolulungileyo apho onke amalungu alo mphakathi ayakuthatha inxaxheba ngokuzinikela nokusebenza ngokupheleleyo bebambisene kunye ngenjongo zokuphumelelisa ukulingana kwabantu jikelele, akukhathaliseki nokuba yeyiphi inkolelo, ubuhlanga okanye izinga umntu akulo ngokokuphila. Jakes Gerwel wayemele amalungelo oluntu kwakunye nobulungisa, yaye ekholelwa ngokugqibeleleyo ekubeni uluntu lunako ukwakha umphakathi obandakanya wonke ubani. Kuko kanye oku ke kuzisa ukukhuthazeka okungaka ekubeni kuyilwe esisiseko siyi Gerwel.